Kulan lagu Gorfaynayay waxqabadka wareegii 3aad ee mashruuca horumarinta bulshada xoolo-Dhaqatada ah PCDP oo ka dhacay hoolka shirarka ee xafiiska madaxtooyada DDSI - Cakaara News
Kulan lagu Gorfaynayay waxqabadka wareegii 3aad ee mashruuca horumarinta bulshada xoolo-Dhaqatada ah PCDP oo ka dhacay hoolka shirarka ee xafiiska madaxtooyada DDSI
JIGJIGA(CN) JIMCE MARCH-13-2015. Waxaa ka dhacay hoolka shirarka ee xafiiska madaxtooyada kulan lagu lafa gurayay waxqabadka wareegii 3aad ee mashuura horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ah pastoral community development project (PCDP).
kulankaasi ayaa waxaa hogaaminayay ku simaha madaxwayne madaxwaynaha DDSI ahna ahna madaxwayne ku xigeenka DDSI marwo sucaad ahmed faarax, waxaana ka soo qaybgalay masuuliyiinta mashruuca PCDP iyo masuuliyiinta xafiisyada ay bahwadaagta yihiin mashruucaasi.
Waxaana ka hadashay furitaankii kulankaasi madaxwayne ku xigeenka ahna ku simaha madaxwaynaha DDSI marwo sucaad ahmed faarax waxayna ka warbixisay ujeedada kulankaasi iyo ahmiyada uu mashruucani u leeyahay guud ahaanba horumarinta deegaanka waxayna tilmaan dheerka bixisay wareegyadii hore ee mashuucan PCDP iyo guula laga dhaacay. Ku simaha madaxwaynaha oo hadalkeeda sii wadata ayaa shaxay sheegtay in mashruucani kor u soo qaatay nolosha bulshada xoolo dhaqatada ah loona baahan yahay in wajigan 3aadna si fiican looga midho dhaliyo.
Maareeyaha mashruuca PCDP mudane dr cabdiqaadir iimaan ayaa soo bandhigay warbixin ku qotonta waxqabadka mashruucan wuxuuna sheegay in mashruucani wajigiisii 1aad uu ka hawlgalay 14 degmo waligiisii 2aadna uu ka hawlgalay 21 degmo halka uu hadana wajigan 3aad ka hawgalayo 54 degmo oo ka mid ah degmooyinka deegaanka.
Wuxuuna maareeyuhu si qoto dheer uga warbixiyay qaybaha uu ka kooban yahay mashruucani isku xidhka maaraynta mashruucan oo uu sheegay in uu ku taxa luqo habnololeedka bulshada xoolo dhaqatada ah iyo kor u qaadida noloshooda. wajigan 3aadna uu meel fiican marayo hirgalintiisu Isku soo wada xooriyoo mashruucan ayaa intii uu ka hirgalay deegaanka ka ka qaybqaatay kor u qaadida nolosha bulshada xoolo dhaqato ah